3D စကင်နာကို ဝယ်ပါ- အကောင်းဆုံးကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
ဣဇာက်သည် | | ပုံနှိပ် 3D
ထို့အပြင် သင်ရိုက်နှိပ်လိုသော အစိတ်အပိုင်း၏ ဂျီသြမေတြီကို သင်ကိုယ်တိုင် ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပရင်တာ 3D ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြု၍ ရှိပြီးသား အရာဝတ္ထုများကို အလွန်တိကျစွာ ကူးယူနိုင်သော နောက်ထပ် ရိုးရှင်းသော ဖြစ်နိုင်ခြေလည်း ရှိသေးသည်။ ၎င်း၏အကြောင်း 3d စကင်နာသင်အလိုရှိသော အရာဝတ္ထု၏ မျက်နှာပြင်ကို စကင်န်ဖတ်ပြီး ၎င်းကို ဒစ်ဂျစ်တယ် ဖော်မတ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ပြန်လည်ထိတွေ့နိုင်သည် သို့မဟုတ် ပုံတူပြုလုပ်ရန်ကဲ့သို့ ၎င်းကို ပရင့်ထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် ၎င်းတို့သည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံး 3D စကင်နာများနှင့် အသင့်တော်ဆုံးကို သင်မည်ကဲ့သို့ ရွေးချယ်နိုင်မည်နည်း။ သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ။
3D စကင်နာ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Inncen Pop 3D စကင်နာ၊... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
တောက်ပသော 3D EINSCAN-SP -... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
HE3D စကင်နာကိရိယာအစုံ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	3D စကင်နာ...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	Inncen Pop 3D စကင်နာ၊...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	တောက်ပသော 3D EINSCAN-SP -...
1 အကောင်းဆုံး 3D စကင်နာများ
1.1 တောက်ပသော 3D EINSCAN-SP
1.2 တောက်ပသော 3D Uno Can
1.5 Innchen POP 3D ပြန်လည်vopoint
2 3D စကင်နာဆိုတာဘာလဲ
2.1 3D စကင်နာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။
2.2.1 မိုဘိုင်း 3D စကင်နာ
2.2.2 အိမ်သုံး 3d စကင်နာ
2.3 3D စကင်နာအက်ပ်များ
2.4 3D စကင်နာကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
အကောင်းဆုံး 3D စကင်နာများ
နာမည်ကျော် German Zeiss၊ Shining 3D၊ Artec၊ Polyga၊ Peel 3D၊ Phiz 3D Scanner စသည်တို့ကဲ့သို့ ထင်ရှားသော အမှတ်တံဆိပ်များစွာ ရှိပါသည်။ မည်သည့် 3D စကင်နာကို ဝယ်ယူရမည်ကို သံသယရှိပါက ဤအရာအချို့ကို ဖော်ပြပါ။ အကောင်းဆုံးမော်ဒယ်များ မှန်ကန်သောဝယ်ယူမှုပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုထားသည်-
တောက်ပသော 3D EINSCAN-SP
တောက်ပသော 3D EINSCAN-SP -...
Este သင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ခုခုကိုရှာဖွေနေလျှင်အဖြူရောင်အလင်းနည်းပညာပါသော 3D စကင်နာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။. ၎င်း၏ resolution သည် 0.05 မီလီမီတာအထိရှိပြီး အသေးဆုံးအသေးစိတ်များကိုပင် ဖမ်းယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည် 30x30x30mm မှ 200x200x200mm အထိ (လှည့်ကွက်ပါရှိသော) နှင့် အချို့သော 1200x1200x1200mm (လက်ဖြင့်သုံးပါက သို့မဟုတ် tripod ဖြင့်) စကင်န်ဖတ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောစကင်န်ဖတ်ခြင်းမြန်နှုန်း၊ တင်ပို့နိုင်စွမ်းရှိသည်။ OBJ၊ STL၊ ASC နှင့် PLYအလိုအလျောက် ချိန်ညှိစနစ်၊ နှင့် USB ချိတ်ဆက်ကိရိယာ။ Windows နဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။
တောက်ပသော 3D Uno Can
တောက်ပသော 3d Uno ကို Uno လုပ်နိုင်သည်...
ဤကျော်ကြားသောအမှတ်တံဆိပ်၏အခြားမော်ဒယ်သည်ယခင်မော်ဒယ်ထက်အတန်ငယ်စျေးသက်သာသည်၊ သို့သော်သင်သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုရန်အတွက်တစ်ခုခုကိုရှာဖွေနေပါက၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လည်းသုံးတယ်။ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု 0.1 မီလီမီတာရှိသော အဖြူရောင်နည်းပညာ 30x30x30 mm မှ 200x200x200 mm မှ ကိန်းဂဏာန်းများကို စကင်န်ဖတ်နိုင်သော စွမ်းရည်နှင့် (လှည့်ကွက်ပေါ်တွင်) 700x700x700 mm ရှိသော ကိန်းဂဏာန်းများကို ကိုယ်တိုင်သုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သောစကင်န်ဖတ်ခြင်းအမြန်နှုန်းရှိပြီး USB မှတစ်ဆင့်ချိတ်ဆက်ကာ ယခင်ပုံစံများကဲ့သို့ OBJ၊ STL၊ ASC နှင့် PLY ဖိုင်ဖော်မတ်များဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Windows နဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။
ဤအခြားအမှတ်တံဆိပ်သည် 3D မော်ဒယ်အတွက် စကင်နာကို ဖန်တီးထားသည်။ အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် အမှတ်အသားများကို အသုံးပြုခြင်းမလိုအပ်ဘဲ အလိုအလျောက်ချိန်ညှိမှုဖြင့်၊ ၎င်းသည် USB မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ပြီး Windows၊ Android နှင့် macOS တို့နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် 0.1 မီလီမီတာအထိနှင့် 0.5 မီလီမီတာအထိ တိကျမှုရှိပြီး ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များနှင့် အရည်အသွေးများကြောင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုရန်အတွက်လည်း ပြီးပြည့်စုံနိုင်သည်။ စကင်န်ဖတ်ခြင်းအတိုင်းအတာနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့သည် ကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်းများကို စကင်န်ဖတ်ရန် အလွန်ကြီးမားပါသည်။
စပိန်အမှတ်တံဆိပ် BQ မှ ဤ 3D စကင်နာသည် သင်ရှာနေပါက နောက်ထပ်ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ DIY လုပ်နိုင်သောအရာ. အရည်အသွေးရှိသော Logitech C0.5 HD ကင်မရာ၊ Class 270 လိုင်းနားလေဆာနှစ်ခု၊ USB ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၊ Nema stepper မော်တာများZUM ဒရိုက်ဘာ၊ G-Code နှင့် PLY သို့ တင်ပို့နိုင်စွမ်းရှိပြီး Linux နှင့် Windows လည်ပတ်မှုစနစ်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Innchen POP 3D ပြန်လည်vopoint
3D POP စကင်နာ၊ 8fps၊...
ယခင်ပုံစံများနှင့် အခြားရွေးချယ်စရာများ။ 3D စကင်နာတစ်ခုနှင့်တစ်ခု 0.3mm တိကျမှု၊ Dual Infrared Sensors (Eye Safe)၊ Depth Cameras၊ Fast Scanning၊ Texture Capture အတွက် RGB Camera၊ OBJ၊ STL၊ နှင့် PLY Export Support၊ Wired သို့မဟုတ် Wireless Ability၊ မတူညီသော စကင်ဖတ်နည်း5ခု၊ Android၊ iOS၊ macOS တို့နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည် နှင့် Windows လည်ပတ်မှုစနစ်များ။
Un 3D စကင်နာသည် အရာဝတ္ထု သို့မဟုတ် မြင်ကွင်းကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သော ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံသဏ္ဍာန်၊ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် တစ်ခါတစ်ရံ အရောင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရယူရန်။ ထိုအချက်အလက်များကို ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှမွမ်းမံပြင်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် သင်၏ 3D ပရင်တာပေါ်တွင် ပရင့်ထုတ်ရန်နှင့် အရာဝတ္ထု သို့မဟုတ် မြင်ကွင်းကို အတိအကျမိတ္တူများပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် သုံးဖက်မြင်ဒစ်ဂျစ်တယ်မော်ဒယ်များအဖြစ် အဆိုပါအချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ပြီး အသွင်ပြောင်းပါသည်။
ဤစကင်နာများအလုပ်လုပ်ပုံသည် အများအားဖြင့် အလင်းပြန်မှုဖြစ်ပြီး၊ အတိအကျ ဂျီသြမေတြီကို ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် အရာဝတ္ထု၏မျက်နှာပြင်တစ်ဝိုက်တွင် ရည်ညွှန်းအချက်များ တိမ်များကိုထုတ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် 3D စကင်နာများ သာမန်ကင်မရာတွေနဲ့ မတူပါဘူး။၎င်းတို့တွင် ပုံသဏ္ဍာန်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော မြင်ကွင်းတစ်ခုရှိသော်လည်း ကင်မရာများသည် အမြင်အာရုံနယ်ပယ်အတွင်းရှိ မျက်နှာပြင်များမှ အရောင်အချက်အလက်များကို ဖမ်းယူနိုင်ပြီး 3D စကင်နာသည် တည်နေရာအချက်အလက်နှင့် သုံးဖက်မြင်အာကာသကို ဖမ်းယူပေးပါသည်။
အချို့သောစကင်နာများသည် တစ်ခုတည်းသောစကင်န်တစ်ခုဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသောမော်ဒယ်ကိုမပေးသော်လည်း ၎င်းအစား အစိတ်အပိုင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအပိုင်းများကိုရယူပြီးနောက် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအသုံးပြု၍ ၎င်းကိုပေါင်းစပ်ရန်ရိုက်ချက်များစွာလိုအပ်သည်။ ဒါတောင်မှ တစ်ခုပဲရှိသေးတာ။ ပိုမိုတိကျသော၊ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး မြန်ဆန်သော ရွေးချယ်မှု အပိုင်းတစ်ခု၏ ဂျီသြမေတြီကို ရရှိရန်နှင့် ၎င်းကို စတင်ပုံနှိပ်နိုင်စေရန်။
3D စကင်နာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။
3D စကင်နာသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ထုတ်လွှတ်သော ဓာတ်ရောင်ခြည်အချို့ဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်။ အလင်း၊ IR သို့မဟုတ် လေဆာရောင်ခြည် ၎င်းသည် ထုတ်လွှတ်သည့်အရာဝတ္ထုနှင့် အရာဝတ္တုကြားအကွာအဝေးကို တွက်ချက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ခုစီအတွက် သြဒိနိတ်များနှင့်အတူ ဒေသဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းချက်အမှတ်နှင့် ကူးယူမည့်အပိုင်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အမှတ်အစီအစဥ်များကို အမှတ်အသားပြုမည်ဖြစ်သည်။ မှန်များကို အသုံးပြု၍ သုံးဖက်မြင်ပုံတူကို ရရှိရန် မျက်နှာပြင်ကို ပွတ်သပ်ပြီး မတူညီသော သြဒီနိတ်များ သို့မဟုတ် အမှတ်များကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အရာဝတ္ထုနှင့် အကွာအဝေး၊ အလိုရှိသော တိကျမှု၊ နှင့် အရာဝတ္ထု၏ အရွယ်အစား သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးမှုပေါ်မူတည်၍ သင်လိုအပ်နိုင်သည်၊ တစ်ခုယူသည် သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသည်။.
အဲဒီမှာ23D စကင်နာ အမျိုးအစားများ ၎င်းတို့စကင်ဖတ်ပုံပေါ်မူတည်၍ အခြေခံအကျဆုံး၊
ဆက်သွယ်ပါ။: ဤ 3D စကင်နာအမျိုးအစားများသည် အရာဝတ္ထု၏မျက်နှာပြင်ရှိ tracer (များသောအားဖြင့် မာကျောသောစတီးလ် သို့မဟုတ် နီလာထိပ်ဖျား) ဟုခေါ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ပံ့ပိုးရန် လိုအပ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပြန်လည်ဖန်တီးရန်အတွက် အချို့သောအတွင်းပိုင်းအာရုံခံကိရိယာများသည် ပရောဖက်၏ spatial အနေအထားကို ဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် တိကျသော 0.01 မီလီမီတာဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်၊ ထိပ်ဖျား သို့မဟုတ် stylus သည် မျက်နှာပြင်ကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော အဖိုးတန်သော (ဥပမာ သမိုင်းဝင် ပန်းပုများ) သို့မဟုတ် နူးညံ့သော အရာဝတ္ထုများအတွက် ကောင်းသော ရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ၎င်းသည် ပျက်စီးစေသော စကင်န်တစ်ခု ဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆက်အသွယ်မရှိပါ။: ၎င်းတို့သည် အကျယ်ပြန့်ဆုံးနှင့် ရှာဖွေရလွယ်ကူသည်။ အဆက်အသွယ် မလိုအပ်သောကြောင့် ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပြီး အစိတ်အပိုင်းကို ပျက်စီးစေခြင်း သို့မဟုတ် မည်သည့်နည်းဖြင့်မျှ ပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ပါ။ စူးစမ်းလေ့လာမည့်အစား၊ ၎င်းတို့သည် အာထရာဆောင်း၊ IR လှိုင်းများ၊ အလင်း၊ X-ray စသည်တို့ကဲ့သို့သော အချက်ပြ သို့မဟုတ် ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုအချို့ကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အကျယ်ပြန့်ဆုံးနှင့် ရှာဖွေရအလွယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဤအတောအတွင်းတွင်၊ မိသားစုကြီးနှစ်စုရှိသည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုများ: ဤကိရိယာများသည် အရာဝတ္ထု၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး အချို့ကိစ္စများတွင် အရောင်ကို ပိုင်းခြားထားသည်။ သုံးဖက်မြင် ဂျီဩမေတြီ အချက်အလက်ကို စုဆောင်းရန် ဝင်ရိုးစွန်း သြဒိနိတ်များ၊ ထောင့်များနှင့် အကွာအဝေးများကို မျက်နှာပြင်ကို တိုက်ရိုက် တိုင်းတာခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်အလင်းတန်းအချို့ (Ultrasound၊ X-ray၊ လေဆာ၊ ...) ကိုထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့် တိုင်းတာမည့် ချိတ်ဆက်မှုမရှိသောအချက်များ တိမ်များကိုထုတ်ပေးပြီး ၎င်းသည် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်နှင့် တင်ပို့ရန်အတွက် polygons အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည့်အတွက်ကြောင့် အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ 3D CAD မော်ဒယ်။ ။ ဤအရာများအတွင်းတွင်၊ ကဲ့သို့သော အမျိုးအစားခွဲအချို့ကို သင်တွေ့လိမ့်မည်-
ပျံသန်းချိန်: လေဆာများကိုအသုံးပြုပြီး ဘူမိဗေဒဖွဲ့စည်းပုံများ၊ အဆောက်အဦများ စသည်တို့ကဲ့သို့သော ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်များကို စကင်န်ဖတ်ရန်အတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည့် 3D စကင်နာအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ်။ အေးတယ်. ၎င်းတို့သည် တိကျမှုနည်းပြီး စျေးသက်သာသည်။
triangulation: ၎င်းသည် အရာဝတ္တုကို ထိမှန်သော အလင်းတန်းနှင့် လေဆာအမှတ်နှင့် အကွာအဝေးကို ရှာဖွေသည့် ကင်မရာဖြင့်လည်း တြိဂံပုံအတွက် လေဆာကို အသုံးပြုသည်။ ဤစကင်နာများသည် မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသည်။
အဆင့်ကွာခြားချက်: ထုတ်လွှတ်သော နှင့် လက်ခံရရှိသော အလင်းကြား အဆင့် ခြားနားချက်ကို တိုင်းတာပြီး အရာဝတ္ထုနှင့် အကွာအဝေးကို ခန့်မှန်းရန် ဤတိုင်းတာမှုကို အသုံးပြုသည်။ ဤသဘောအရ တိကျမှုသည် ယခင်နှစ်ခုကြားတွင် အလယ်အလတ်ဖြစ်ပြီး ToF ထက် အနည်းငယ်မြင့်ပြီး triangulation ထက် အနည်းငယ်နိမ့်သည်။
conoscopic holography: မျက်နှာပြင်တစ်ခုမှ အလင်းပြန်သော အလင်းတန်းတစ်ခုသည် အလင်းယိုင်မှု အညွှန်းကိန်း နှစ်ခုပါရှိသော ပုံဆောင်ခဲတစ်ခု၊ သာမန်နှင့် ပုံသေတစ်ခုနှင့် အခြားထူးခြားသော အရာတစ်ခုဖြစ်သည့် အလင်းယပ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှု အညွှန်းကိန်း နှစ်ခုပါရှိသော ပုံဆောင်ခဲတစ်ခု၊ ပုံဆောင်ခဲ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရောင်ခြည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ဆလင်ဒါမှန်ဘီလူးကို အသုံးပြု၍ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အပြိုင်အလင်းတန်းနှစ်ခုကို ရရှိပြီး အစွန်းအဖျားပုံစံကိုရရှိသည့် သမားရိုးကျကင်မရာတစ်ခု၏ အာရုံခံကိရိယာမှ ဖမ်းယူရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု၏ကြိမ်နှုန်းသည် အရာဝတ္ထု၏အကွာအဝေးကို ဆုံးဖြတ်သည်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသောအလင်း: အရာဝတ္ထုပေါ်ရှိ အလင်းပုံစံတစ်ခုကို ပရောဂျက်လုပ်ကာ မြင်ကွင်း၏ ဂျီသြမေတြီကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပုံစံကွဲခြင်းကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပါ။
modulated အလင်း: ၎င်းတို့သည် အလင်းကို ထုတ်လွှတ်သည် (၎င်းတွင် အများအားဖြင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လည်ပတ်မှု ပုံစံဖြင့်) အရာဝတ္တုတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲနေပါသည်။ အကွာအဝေးကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကင်မရာက ၎င်းကို ဖမ်းယူမည်ဖြစ်သည်။
တာဝန်ဝတ္တရား: ဤစကင်နာအမျိုးအစားသည် ၎င်းကိုဖမ်းယူရန် ဓာတ်ရောင်ခြည်အချို့ကို အသုံးပြု၍ အကွာအဝေးအချက်အလက်ကိုလည်း ပေးစွမ်းမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် မတူညီသော ရိုက်ကူးထားသောပုံများကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် သုံးဖက်မြင်အချက်အလက်များရရှိရန် အခင်းဖြစ်ပွားရာဆီသို့ ဦးတည်သည့် သီးခြားကင်မရာတစ်စုံကို အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းသည် အချက်တစ်ခုစီ၏ အကွာအဝေးကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး 3D ပုံစံအတွက် သြဒိနိတ်အချို့ကို ပေးပါမည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ စကင်န်ဖတ်ထားသော အရာဝတ္ထု၏ မျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖမ်းယူနိုင်သည့်အပြင် စျေးပိုသက်သာသည့်အခါတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များကို ရရှိနိုင်သည်။ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် ကွာခြားချက်မှာ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ရောင်ခြည် အမျိုးအစားကို ထုတ်လွှတ်ခြင်းမရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် အရာဝတ္တုပေါ်မှ ရောင်ပြန်ဟပ်နေသည့် အလင်းရောင်ကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှိနေပြီးသား ထုတ်လွှတ်မှုများကို ဖမ်းယူရန် ၎င်းတို့ကို ကန့်သတ်ထားသည်။ အစရှိတဲ့ မျိုးကွဲအချို့လည်း ရှိပါတယ်။
stereoscopic: ၎င်းတို့သည် photogrammetry ကဲ့သို့ တူညီသော နိယာမကို အသုံးပြုကာ ပုံရှိ pixel တစ်ခုစီ၏ အကွာအဝေးကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းသည် တူညီသောမြင်ကွင်းတစ်ခုတွင် ညွှန်ပြသည့် သီးခြားဗီဒီယိုကင်မရာနှစ်ခုကို အသုံးပြုသည်။ ကင်မရာတစ်ခုစီမှ ရိုက်ကူးထားသော ပုံများကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် ဤအကွာအဝေးများကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
Silhouette: အရာဝတ္တု၏ အနီးစပ်ဆုံးပုံသဏ္ဍန်အဖြစ် ၎င်းတို့ကိုဖြတ်ကျော်ရန် ၎င်းတို့ကိုဖြတ်ကျော်ရန်အတွက် သုံးဖက်မြင်အရာတစ်ဝိုက်ရှိ ဓာတ်ပုံများ၏ အဆက်အဆက်မှ ဖန်တီးထားသော ပုံကြမ်းများကို အသုံးပြုပါ။ အတွင်းပိုင်းကို ဖမ်းယူမည်မဟုတ်သောကြောင့် ဤနည်းလမ်းသည် အခေါင်းပေါက်အရာများအတွက် ပြဿနာရှိသည်။
ရုပ်ပုံအခြေခံ မော်ဒယ်လ်: photogrammetry ကိုအခြေခံ၍ အခြားအသုံးပြုသူအကူအညီပေးသည့်နည်းလမ်းများရှိပါသည်။
မိုဘိုင်း 3D စကင်နာ
အသုံးပြုသူတော်တော်များများက သင်တတ်နိုင်သလားလို့ မေးလေ့ရှိပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းကို 3D စကင်နာကဲ့သို့ အသုံးပြုပါ။. အမှန်တရားမှာ မိုဘိုင်းလ်အသစ်များသည် အချို့သောအက်ပ်များကြောင့် 3D ရုပ်ပုံများကိုဖမ်းယူနိုင်စေရန် ၎င်းတို့၏ပင်မကင်မရာအာရုံခံကိရိယာများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ သီးခြား 3D စကင်နာကဲ့သို့ တူညီသောတိကျမှုနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရလဒ်များ ရရှိမည်မဟုတ်သည်မှာ ထင်ရှားသော်လည်း ၎င်းတို့သည် DIY အတွက် အသုံးဝင်နိုင်ပါသည်။
တချို့က ကောင်းတယ်။ မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများအတွက် အက်ပ်များ သင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်၍ စမ်းသုံးနိုင်သော iOS/iPadOS နှင့် Android များမှာ-
အိမ်သုံး 3d စကင်နာ
တတ်နိုင်ရင် မေးတတ်တယ်။ အိမ်လုပ် 3d စကင်နာတစ်ခု ပြုလုပ်ပါ။. အမှန်က ထိုကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်တွင် သင့်အား များစွာကူညီပေးနိုင်သော ထုတ်လုပ်သူများအတွက် ပရောဂျက်များရှိပါသည်။ OpenScan. Arduino ကိုအခြေခံထားသော ပရောဂျက်အချို့ကိုလည်း သင်တွေ့နိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို သင်ကိုယ်တိုင်စုစည်းရန် ပုံနှိပ်နိုင်သည်။ ဒီလိုမျိုး, နှင့်ပင်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ xbox kinect ကို 3d စကင်နာအဖြစ်သို့ မည်သို့ပြောင်းလဲမည်နည်း။. ထင်ရှားသည်မှာ၊ ၎င်းတို့သည် DIY ပရောဂျက်များနှင့် သင်ယူမှုအတွက် ကောင်းမွန်သော်လည်း၊ ပညာရှင်များကဲ့သို့ တူညီသောရလဒ်များကို သင်ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ယင်းကြောင့် 3D စကင်နာအက်ပ်များ၊ သင်စိတ်ကူးထားတာထက် အများကြီးပိုအသုံးဝင်ပါတယ်-
စက်မှုအသုံးချမှု: ထုတ်လုပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများသည် လိုအပ်သော ခံနိုင်ရည်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရန်အတွက် အရည်အသွေး သို့မဟုတ် အတိုင်းအတာ ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
နောက်ပြန်အင်ဂျင်နီယာ: အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ တိကျသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံကို လေ့လာပြီး ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ၎င်းတို့သည် အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။
စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများအဖြစ် တည်ဆောက်သည်။: ပရောဂျက်များ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အဆောက်အဦ သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ရေးအခြေအနေ၏ တိကျသောမော်ဒယ်များကို ရယူနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရွေ့လျားမှု၊ ပုံပျက်ခြင်း စသည်တို့ကို မော်ဒယ်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖျော်ဖြေရေးရုပ်ရှင်များနှင့် ဗီဒီယိုဂိမ်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အရာဝတ္ထုများ သို့မဟုတ် လူများကို စကင်န်ဖတ်ရန် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် တကယ့်ဘောလုံးကစားသမားကို စကင်န်ဖတ်ပြီး ဗီဒီယိုဂိမ်းတွင် ပိုမိုလက်တွေ့ကျစေရန် ၎င်းကို လှုပ်ရှားသက်ဝင်စေရန် 3D မော်ဒယ်ကို ဖန်တီးနိုင်သည်။
ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သမိုင်းအမွေအနှစ်များကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း၊: ၎င်းကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်၊ မှတ်တမ်းတင်ရန်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်မှတ်တမ်းများ ဖန်တီးရန်နှင့် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သမိုင်းအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ပန်းပုများ၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ၊ မမ်မီများ၊ အနုပညာလက်ရာများ စသည်တို့ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်။ တိကျသောပုံစံတူများကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး မူရင်းပုံစံများကို မပျက်စီးစေရန် ဖန်တီးနိုင်သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ် မော်ဒယ်များကို ဖန်တီးပါ။: မြေမျက်နှာသွင်ပြင် အမြင့်များကို ဆုံးဖြတ်ရန်၊ လမ်းကြောင်းများ သို့မဟုတ် ရှုမျှော်ခင်းများကို ဒစ်ဂျစ်တယ် 3D ဖော်မတ်သို့ ပြောင်းရန်၊ 3D မြေပုံများ ဖန်တီးခြင်း စသည်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရန် အခြေအနေများ သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်များကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာနိုင်ပါသည်။ ပုံများကို 3D လေဆာစကင်နာများ၊ RADAR ဖြင့်၊ ဂြိုလ်တုပုံများ စသည်တို့ဖြင့် ရိုက်ကူးနိုင်သည်။
3D စကင်နာကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
ဘယ်အချိန်မှာ သင့်လျော်သော 3D စကင်နာကို ရွေးချယ်ပါ။မော်ဒယ်များစွာကြားတွင် သင် တုံ့ဆိုင်းနေပါက၊ သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် အကိုက်ညီဆုံးနှင့် သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည့် ဘတ်ဂျက်ကို ရှာဖွေရန် လက္ခဏာရပ်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင့်သည်။ သတိထားရမည့်အချက်များမှာ-
ဘတ်ဂျက်- သင်၏ 3D စကင်နာတွင် မည်မျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ယူရို 200 သို့မဟုတ် 300 ယူရိုမှ ယူရိုထောင်နှင့်ချီသော တန်ဖိုးများရှိသည်။ ၎င်းသည် အိမ်သုံးအတွက်ဖြစ်မဖြစ်၊ အလွန်အကျွံမရင်းနှီးသည့်နေရာ၊ သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုမှုအတွက်၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပေးမည့်နေရာတို့အပေါ်လည်း မူတည်ပါသည်။
ဟုတ်မှန်ရေး: အရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိကျမှု ပိုကောင်းလေ၊ ရလဒ်ကောင်းများ ရနိုင်လေဖြစ်သည်။ အိမ်သုံးအပလီကေးရှင်းများအတွက် တိကျမှုနည်းပါးခြင်းသည် လုံလောက်နိုင်သော်လည်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပလီကေးရှင်းများအတွက် 3D မော်ဒယ်၏အသေးဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရရှိရန် အလွန်တိကျရန်အရေးကြီးပါသည်။ စီးပွားဖြစ်စကင်နာများစွာသည် တိကျမှုနည်းသည်မှ ပိုမိုတိကျသောအထိ 0.1 မီလီမီတာနှင့် 0.01 မီလီမီတာကြားတွင် ရှိတတ်သည်။
resolution ကို: ရရှိသော 3D မော်ဒယ်၏ အရည်အသွေးသည်လည်း ၎င်းပေါ်တွင်မူတည်သော်လည်း ၎င်းသည် တိကျမှုနှင့် မရောထွေးသင့်ပါ။ တိကျမှုသည် စက်၏ ပကတိမှန်ကန်မှုအတိုင်းအတာကို ရည်ညွှန်းသော်လည်း ကြည်လင်ပြတ်သားမှုသည် 3D မော်ဒယ်အတွင်း အမှတ်နှစ်ခုကြားရှိ အနိမ့်ဆုံးအကွာအဝေးဖြစ်သည်။ ၎င်းကို မီလီမီတာ သို့မဟုတ် မိုက်ခရိုနမ်ဖြင့် တိုင်းတာလေ့ရှိပြီး သေးငယ်လေ ရလဒ်များ ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။
စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအမြန်နှုန်း: စကင်န်လုပ်ဆောင်ရန် အချိန်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသည့်နည်းပညာပေါ် မူတည်၍ 3D စကင်နာကို တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း တိုင်းတာနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တည်ဆောက်ထားသော အလင်းအခြေခံစကင်နာများကို FPS သို့မဟုတ် တစ်စက္ကန့်လျှင် ဖရိမ်များဖြင့် တိုင်းတာသည်။ အခြားအရာများကို တစ်စက္ကန့်လျှင် အမှတ်ဖြင့် တိုင်းတာနိုင်သည်။
အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်း: 3D စကင်နာကိုရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ အများအပြားသည် အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး အဆင့်မြင့်ပြီး သုံးစွဲသူထည့်သွင်းမှုများစွာမလိုအပ်ဘဲ အလုပ်ပြီးမြောက်ရန် လုံလောက်သော်လည်း၊ အခြားအရာများထက် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်ကို သင်တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အစိတ်အပိုင်းအရွယ်အစား: 3D ပရင်တာများတွင် အတိုင်းအတာကန့်သတ်ချက်များရှိသကဲ့သို့ 3D စကင်နာများသည်လည်း လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အရာဝတ္ထုအသေးစားများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သောအသုံးပြုသူတစ်ဦး၏လိုအပ်ချက်များသည် ကြီးမားသောအရာများအတွက် ၎င်းကိုအသုံးပြုလိုသူနှင့်မတူပါ။ များစွာသော ကိစ္စများတွင် ၎င်းတို့ကို အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိ အရာဝတ္ထုများကို စကင်န်ဖတ်ရန် အသုံးပြုသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် သင်ကစားသည့် အနိမ့်ဆုံးနှင့် အများဆုံး အတိုင်းအတာ၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသင့်ပါသည်။
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူ: ရိုက်ချက်တွေကို ဘယ်နေရာမှာ ရိုက်ကူးဖို့ စီစဉ်ထားလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ အရေးကြီးသလို၊ နေရာအနှံ့ သယ်ဆောင်ဖို့နဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို ရိုက်ကူးဖို့အတွက် ပေါ့ပါးမှုရှိမရှိ စတာတွေကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ အနှောင့်အယှက်ကင်းစွာ ဖမ်းယူနိုင်စေရန် ဘက်ထရီပါဝါရှိသော ကိရိယာများလည်း ရှိပါသည်။
compatibility: သင့်ပလပ်ဖောင်းနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော 3D စကင်နာများကို ရွေးချယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ အချို့သော ပလပ်ဖောင်းများသည် မတူညီသော လည်ပတ်မှုစနစ်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း အားလုံးမဟုတ်ပါ။
Software များ: ၎င်းသည် 3D စကင်နာကို အမှန်တကယ် တွန်းအားပေးသည့်အရာဖြစ်သည်၊ ဤစက်ပစ္စည်းများ၏ ထုတ်လုပ်သူများသည် များသောအားဖြင့် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ကြသည်။ အချို့မှာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ မော်ဒယ်ပြုလုပ်ခြင်း စသည်တို့အတွက် အပိုလုပ်ဆောင်ချက်များ ရှိတတ်ပြီး အချို့မှာ ပိုမိုရိုးရှင်းပါသည်။ သို့သော် သတိထားပါ၊ အချို့သော ပရိုဂရမ်များသည် အမှန်တကယ် အားကောင်းပြီး ၎င်းတို့သည် သင့်ကွန်ပျူတာ (GPU၊ CPU, RAM) မှ အနည်းဆုံး လိုအပ်ချက်များ လိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် developer သည် ကောင်းမွန်သော ပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် မကြာခဏ အပ်ဒိတ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့်အတွက် ကောင်းမွန်ပါသည်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု: ဖမ်းယူသည့် ကိရိယာကို တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်နှင့် လွယ်ကူစွာ ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းလည်း အပြုသဘောဆောင်ပါသည်။ အချို့သော 3D စကင်နာများသည် ပိုမိုစစ်ဆေးမှုများ လိုအပ်သည် ( optics သန့်ရှင်းရေး၊ … ) သို့မဟုတ် ၎င်းတို့သည် manual calibration လိုအပ်သည်၊ အခြားသူများက ၎င်းကို အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။
အလတ်စား: 3D မော်ဒယ်ကို ရိုက်ကူးစဉ်အတွင်း အခြေအနေများ မည်သို့ဖြစ်မည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့သည် အချို့သော စက်ပစ္စည်းများနှင့် နည်းပညာများကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အလင်း၊ စိုထိုင်းဆ၊ အပူချိန်စသည်တို့။ ထုတ်လုပ်သူသည် ၎င်းတို့၏ မော်ဒယ်များ ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်သည့် အပိုင်းများကို ညွှန်ပြလေ့ရှိပြီး သင်ရှာဖွေနေသော အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီမည့် တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » ပုံနှိပ် 3D » 3D စကင်နာကို ဝယ်ပါ- အကောင်းဆုံးကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။